Kanjani futhi yini ukuba aphathe i-pneumonia?
"Ukuvuvukala wamaphaphu" - umusho-ibhuloho phakathi kodokotela kanye odokotela. Kuyasiza nje ukuchaza izindlela eziyinkimbinkimbi lesi sifo. Man emgwaqweni akubalwa wazi ukuthi kwenzekani emzimbeni ngesikhathi samanje. Ukuze ukuhlola ubungozi futhi baqala ukwelashwa, ngokwanele ukuzwa kusuka udokotela amagama amabili kuphela: "i-pneumonia." Lesi sihloko sizosisiza ukuba uqonde indlela yokuphatha inyumoniya e abadala ezinganeni.
In imvelo yezokwelapha, le nkulumo alisetshenziswa, indawo kuyinto inyumoniya ababewazi futhi kahle wafunda. Morphologically yisishiso nezicubu wamaphaphu nge amagciwane, isikhunta, lenyama noma saprophytic microflora emaphashini ngokwabo. Inqubo ngokwaso kuhambisana zonke izimpawu sici: ubuhlungu, ukuvuvukala, ububomvu (thina awuboni, kodwa kungcono khona), izinga lokushisa rise and umsebenzi okungavamile. Ngaphezu kwalokho, kukhona ngokuvamile propotevanie liquid focus esikhaleni pleural.
Njengoba ngokuvamile kwenzeka kwezokwelapha, ziye zakhomba eziningi izigaba, okuyinto angaqoqwa zonke izinhlobo inyumoniya:
- Alopecia, nengivuvuke usesikhundleni ingxenye encane parenchyma wamaphaphu, kwesinye isikhathi ukubandakanywa le bronchus;
- segmental - ngesinyenyela osayizi kufinyelelwe eyodwa noma ngaphezulu izingxenye;
- Equity - enqubeni sokugembula abathintekayo lonke share;
- a abakhwabanisi uma izikhungo eziningana ndawonye ukuze zakhe ubuzalwane emikhulu;
- Imininingwane - ke sisebenza kuzo zonke ukukhanya, noma kokubili.
- eyodwa emaceleni;
- kabili emaceleni.
- eyinhloko - isifo ezimele;
- yesibili - eba ku ngemuva kwenye ukugula noma nokunwetshiwe embhedeni ukuphumula.
- umphakathi aluthola, okungukuthi, inyumoniya oluvamile;
- esibhedlela, e-esibhedlela noma nosocomial, okungukuthi, lapho esavela ngemva umuntu engena esibhedlela ...
Indlela eyinhloko yokuthola izifo zokuphefumula uhlala endleleni sisemoyeni. Abantu akakwazi ukuphefumula, bese emoyeni ingxube esabekayo amagesi, amagciwane, ukungcola kanye izinhlayiya okuqinile. Kodwa, ngaphezu negesi lokushintshisana nge imvelo bangaphandle, engasindi ukuxhumana ngisho nemvelo zomzimba zangaphakathi ngokusebenzisa igazi-lymph izitsha. Ngakho-ke, asikwazi ukukhipha indlela amagciwane nezinye focus ukuvuvukala, okungukufa esiyinhloko ukusabalala kwamagciwane.
Lapho lwegciwane singene engenhla ipheshana zokuphefumula, ihamba nge ukusakaza emoyeni ezijulile kwesihlahla bronchial. Kulapha-bacterium ayeke futhi baqala beyokwakha amakoloni, okubangela ukucinana kwemigudu yokuphefumula acute degrees oyinkimbinkimbi isisindo obuhlukahlukene.
Lapho amakoloni nezilwanyana ezincane adluliselwe umgodi we bronchus kuya parenchyma wamaphaphu, odokotela bathi i-pneumonia. Uma kungekho senzo esithathwayo, isifo okwengeziwe izicubu onempilo, futhi kukhona ekhukhwini ukushiya kwezinye izitho. Nge ukuqhubeka kwesifo lukhula ukudakwa, hypoxia, futhi kwezinye izimo, inhliziyo ukwehluleka. Ngokuvamile kwakuthinta iphaphu kwesokudla, njengoba bronchus zako ezisemqoka mufushane futhi ebanzi kuka ngakwesobunxele.
Njengomthetho, ngokushesha ukuhlukanisa inyumoniya kusukela ukucinana kwemigudu yokuphefumula kunzima ngempela. Zombili lezi zifo imfiva manifest, ukukhwehlela, expectoration. Kodwa emva kwesikhashana, lapho ukudakwa luyanda, kukhona imfiva ngaso linye eqinile okushisa ekuseni nakusihlwa, ubuhlungu ngesikhathi ukuphefumula, isikhwehlela iba ubovu bese yezwa nephunga elibi.
Ngomqondo ovulekile, lesi sifo kubonakala ukuphefumula kanzima, rales futhi crepitus, ukwehla imisindo (izwi ethuthumela, bronhofoniya), kanye ukubukeka izithunzi phezu ifilimu ethafeni kwamaphaphu.
Kunoma ikuphi, akudingekile ngokushesha ngemuva kancane ukukhwehlela esevile umhlahlandlela yezokwelapha futhi bheka isigaba "Ukuvuvukala emaphashini. Izimpawu kwabadala. " Kanjani ukwelapha lesi sifo, zichaziwe ngezansi.
Ezinye izinhlobo pneumonia
Atypical. It is abizwa kanjalo ngenxa ukugeleza salo ngokuphelele ngokungafani izimpawu "zakudala" i-pneumonia. Qala bushelelezi, ne ukukhwehlela okuncane ezomile. Iziguli esekhala nokudlanga ikhanda kanye muscle ubuhlungu, isicanucanu, ubuthakathaka. On izithombe esifubeni hhayi izinguquko kungenzeka nhlobo.
Secondary. It ihlukaniswe yaba zenyathi eziningana.
- ukuncela - emva ephefumula zemizimba angaphandle, esiswini noma amakhemikhali (acid, lezisekelo);
- ukonakala, nge predominance izithombe sepsis acute;
- hypostatic lapho isiguli ithobela a esiqinile eside embhedeni ukuphumula, noma ngomshini womoya-mpilo;
- immunodeficiency, ukutheleleka ezingosomathuba kubangelwa ukwehla jikelele ukumelana ukutheleleka;
- posttraumatic - focus ukuvuvukala kuvumelana indawo yokulimala.
Esingayenza ngaphandle kokuthi siphathe inyumoniya uma kulandela? Kuyadingeka ukuba balahle yayiyini imbangela yalesi sifo. Lokhu kuyoba isu ngempumelelo kakhulu kule ndaba, ngoba yokwelapha lingaze kungase kungabi ngempumelelo kulesi simo.
Izindlela eyinhloko uphenyo kweziguli ukuxilongwa yangaphambilini ye "inyumoniya" yilezi:
ephelele kakhulu segazi, elibonisa isithombe ukuvuvukala acute (aphakeme erythrocyte sedimentation isilinganiso, shift kwesokunxele leukocyte kumafomu abasha, anaemia);
ukuhlaziywa kwamakhemikhali kwegazi (acute isigaba inkomba Dysproteinemia, anda amazinga immunoglobulin, ayisiza);
amagesi igazi (ishayela oximetry), ibonisa degree of nokuvaleka kwemigudu yokuphefumula;
isikhwehlela kwimidiya okuqinile ukucacisa lwegciwane;
Gram Umbala amagciwane;
esifubeni X-ray multi-umbono;
CT, i-MRI (uma kunesidingo).
izindlela zocwaningo engeziwe, ezithinta ikakhulu uphethwe yezinkinga kukhona wamaphaphu biopsy futhi pleura, bronchoscopy, angiography nezinye izinqubo koda. Zisetshenziswa kaningi kakhulu, ngenxa yokuthi isiguli lihlotshaniswa ukungakhululeki kanye nokuthuthukiswa izindlela zokuthwebula izithombe zokwelapha zanamuhla zokukhwabanisa kungagwenywa.
Odokotela namuhla ngizibuze: "Indlela aphathe i-pneumonia?", Futhi ngeke ngoba abazi ukuba ngifunde ngesikhathi sikhungo noma igagasi emisha umkhakha ukhohlwe indlela yokukwenza. Kunalokho, ezihlukahlukene izindlela ukuba zixazulule le nkinga, uhla enkulu imikhiqizo nezinsiza etiotropic amandla ukukhetha impatho efanele.
I kuphela, kodwa kusimo okuphawulekayo ukuthi abantu abavamile, abanale nombono ofiphele yini i-pneumonia, uzama ngokwabo ukwenza njenge Aesculapius. ngokuvamile kuba kanje: umuntu uyalibona e ukukhathazeka kwakhe, ngokombono wakhe, izimpawu, futhi ngokushesha odlula ... cha, hhayi umtholampilo, futhi kuyi-computer ukuze ufake isicelo efana "izimpawu pneumonia." Kanjani ukwelapha lesi sifo bazomtshela umalume ezinhle-Google Kumane kungenxa yokuthi, njengoba ibhonasi.
Ngemva kwalokho, indoda lethu ligijima ekhemisi ukuthenga imithi elwa namagciwane, kodwa enjalo, wangena indlela ukuba ngokunembile futhi ngokushesha, e izinsukwana, ususa sonke izimpawu. Kulesi umsebenzi yakhe yenzeke. imithi Yasiza kungaba emuva ukusebenza ukulwa. Kodwa kwezifo alukapheli, wayehleli futhi elinde yimuphi ithuba lokubuyela, futhi ama-bacterium namagciwane ukuthi kubangelwa manje ziyamelana nemithi yokwelapha.
Ake sibone ukuthi kwenzeka kanjani okudingekayo ukuze ngenze into elungile.
izindlela Izidakamizwa khulula
Encwadini nentuthuko ejwayelekile mayelana nodaba isifo, lapho aphathe i-pneumonia, ngisho ephakanyiswe kwi-ajenda. Yiqiniso esibhedlela! Kukhona ungakha kwezimo ezifanele ukuphulukiswa. Lokhu ukuphumula embhedeni, ezihlukahlukene ukudla okunempilo, amanzi ocebile ane-alikhali futhi ulale ngokwanele. Mayelana umsebenzi enyama awakwazi kubhekwe. Ngemva ephelele emitholampilo laboratory yokutakula kufanele kuthatha cishe izinyanga ezimbili kuya kwezintathu nangaphambi kokuba isiguli sibe bazovunyelwa khona imfundo ngokomzimba noma Tutor.
Uma ukhetha ukuthatha lesi sinyathelo, indlela yokuphatha nenyumoniya ekhaya, uzodinga zonke nokubheka kade okunakekela isiguli. Okokuqala lokushisa ekamelweni kumele singeqi 18-22 degrees Celsius. Ngaphansi - kungaba, kodwa ayisekho ezifiselekayo, njengoba ngesikhathi imfiva overdried kakade emoyeni ngeke obulimaza nolwelwesi lwamafinyila futhi babhebhethekise ukuvuvukala. Okwesibili - yokuhlanza ezimanzi. Ideal - kabili ngosuku, kodwa uma lokhu kungeke kwenzeke, khona-ke okungenani kanye ngosuku. It is hhayi Kunconywa ukusebenzisa izibulali-magciwane, njengoba kungase futhi kube nomthelela kwesihlahla bronchial.
Njengoba omunye izimpawu pneumonia kuyinto ukukhwehlela, udinga ukuthatha lokhu ku-akhawunti nawabela yokwelapha. Kungcono ukucacisa uhlobo ukukhwehlela: ezomile noma ezimanzi, futhi kuphela emva kwalokho eyolanda imithi. Ngokwe yezifiso yokwelashwa, ebukhoneni isifuba esomile ezidingekayo siguqulwa sibe ezimanzi, ukuqalisa isikhwehlela ezimanzi thatha ukukhwehlela mucolytic, isikhwehlela for expectoration kangcono.
Kunezikhathi lapho kuphela ukukhwehlela evimbela ukuphulukiswa, kokuzama isiguli, kodwa ngaphandle ziletha impumuzo enkulu. Kulokhu, imithi yokwelapha engiyisebenzisayo ethonya isikhungo ukukhwehlela. Umgomo yokuyelapha ukumisa izimpawu ungakhululekile.
umbuzo Global: "Indlela aphathe nenyumoniya ngemithi elwa namagciwane," oluthatha izingqondo hhayi kuphela odokotela, kodwa ososayensi bayazi kahle usongo kungalawulwa ngendlela yokwelapha ngemithi elwa namagciwane. Ngenxa yokukhetha okungafanele kwezidakamizwa amagciwane abe emithini yomugqa, zikhiqiza izinto iwukudambisa imiphumela izidakamizwa. Lapho la magciwane siya okuningi - kuba inkinga engathí sina, ngoba ukuze uziqede kusuka emzimbeni kuba nzima ngokwengeziwe.
Kodwa ngaphambi kokuba babe novalo bese abaleke esibhedlela, kufanele namanje ulalele lokho udokotela asitshela wena. Believe me, uyazi kancane kungcono kunokwelapha inyumoniya kuka kanyoko, umama wakwakhe, umakhelwane noma ngisho kwi-Inthanethi.
Ukuze uqale, onguchwepheshe kuzothatha uvivinyo ezidingekayo bese njengendlela ndlela umshayeli linqume ezibanzi-spectrum-antibiotic, ngokuvamile i-penicillin. Futhi izinsuku ezintathu uyogcina Dynamics impilo isiguli sakhe. Uma izenzakalo ezinhle-ke konke kulungile, kanti izidakamizwa akumele ushintshwe. Uma emva kwezinsuku ezintathu isimo ayikashintshi noma saba sibi kakhulu, kunengqondo ukucabanga mayelana noshintsho okuholela umuthi namandla. Kunoma yikuphi, ngemva kwesonto okufanele sehlele ngemiphumela yocwaningo microbiological ezibonisa ezifweni microorganism izinhlobo etholakalayo izidakamizwa.
Ngezinye izikhathi ungase ubone nenyumoniya atypical - izimpawu ngaphandle imfiva. Indlela esiphatha ngayo kulesi simo? Yebo, cishe iyafana yisishiso evamile. Kodwa phawula ukuthi isiguli eba inyumoniya, uma kungekho imfiva, kunzima kakhulu, ngakho-ke, kudingeka usizo lwezokwelapha.
Uma ingane iyagula
Indlela esiphatha ngayo inyumoniya ezinganeni - indaba ohluke ngokuphelele. Ungalindi, lapho abandayo noma ukucinana kwemigudu yokuphefumula iya ku-pneumonia. Kungcono xhumana ukunakekelwa okuyisisekelo wezingane usizo lochwepheshe. Uyokwazi ukunquma ukuthi esibhedlela kudingeka, kufanele aphathwe nzima isimo somntwana kanjani nokuthi.
Njengomthetho, ngokuvamile, imithetho yokwelapha i-pneumonia ezinganeni akuyona ezahlukene ikakhulukazi kusukela ukuthi abantu abadala. Mode ebekiwe embhedeni futhi embhedeni ngezinye izikhathi esiqinile, ukuphuza ngokweqile, yokuhlanza ezimanzi nsuku zonke, ngokulinganisela kuma lokushisa. Kwezokwelapha ukukhwehlela lesifanele, kutshalwe flora antibiotic.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi akubona bonke abangabohlobo efanelekayo izingane. Kukhona lonke iqembu izidakamizwa ezingenziwanga elisetshenziswa wezifo zezingane ngenxa imiphumela yabo anobuthi kwesibindi, nezinso, isimiso sezinzwa futhi izinzwa. Akunakusetshenziswa ungazami aphathe ingane ekhaya, eqondiswa ulwazi lwabo, isipiliyoni kanye nezeluleko zabantu kude imithi.
ukwelashwa iziguli noma esibhedlela ekhaya
Indlela esiphatha ngayo nenyumoniya ekhaya, lapho emsebenzini noma esikhungweni sezemfundo akunakwenzeka ukuba ngithathe ikhefu lokugula? Kufana kancane more xaka okungaphezu nje ukubona udokotela futhi ukubeka wonke umthwalo phezu kwakhe, kodwa ungazama.
Okokuqala, ukuze belaphe i-pneumonia, kufanele ube ukuxilonga ngokwakho. Indlela i-pneumonia ziye achazwe ngenhla, ngakho ngicabanga ngawo ngeke. Ngakho, uthola ukuthi lesi sifo, ngakho-ke, kubalulekile ukuba ayeke ke, ukuze bakwazi ukwenza imisebenzi yabo professional. Ukuze wenze lokhu, ubambelela esiqinile embhedeni ukuphumula okungenani izinsuku ezimbalwa, futhi ngokuvamile okuningi ukuphuza (lamanzi esiphethu ane-alikhali ikakhulukazi), kukhona umhluzi izakhi.
Shoot phansi lokushisa akudingekile, uma kugcinwa ngaphakathi 37-38 degrees. Lokhu kuzakuba yisibonakaliso kundlu ezinhle ukuthi umzimba uzama ukulwa nesifo. Thatha imithi elwa namagciwane njengoba iqondiswe, ungakhohlwa mayelana mucolytics futhi immunomodulators zokuthuthukisa ukumelana lomzimba.
Lena kuphela uhlu encane, esingayenza ngaphandle kokuthi siphathe nenyumoniya. Ngo inqubo yokwelapha yesimanje, kukhona yezifiso ethize lapho ukwelashwa okukhulunywa ngaso ngezigaba, ikhumbula izici nesineke futhi lesi sifo. Ngakho-ke, uthembe ochwepheshe zabo kwezempilo.
Indlela esiphatha ngayo inyumoniya amakhambi abantu? Phela, kukhona impela izitha wezokwelapha olusemthethweni, unquma ukuthi imizimba yabo kangcono kakhulu yokubhekana nalesi sifo kunanoma iyiphi enye, okusho ukuthi ungakwazi ukuhlola.
amakhambi Folk zinhle ibhekwa imithi kuphela njengoba, kodwa hhayi njengomuntu self-ukwelashwa. Ngakho, kutuswa yidla uju, ujamu black elderberry, raspberry isiphuzo itiye. Futhi ngenxa yokuthi izindlela ngokomzimba ukuze expectoration kangcono ukwenza ephefumula amazambane abilisiwe, unyawo zokugeza efudumele, lwesinaphi namabhange. Kodwa lezi manipulations kakade uhambile ngemuva ukusetshenziswa interferon amalungiselelo futhi isizukulwane yakamuva kwama-antibiotic.
inyumoniya kanjani ukuphathwa? okungenani amaviki amathathu, kokubili abadala kanye nezingane. Ukupholisa isimo kungavuka ngesonto, kodwa yokutakula wokugcina resorption izilonda emaphashini akuyona ngaphambi kwezinsuku ezinga-21 kusukela kuqale ukwelashwa.
Futhi, ungakhohlwa mayelana yokwelapha ezengeziwe, ngaphezu elwa namagciwane, okuyinto Ubuye umugqa wesikhathi yayo siqu. Kunoma ikuphi, impumuzo esheshayo isifo akufanele ukubala. Yokutakula - kuyinqubo onzima.
Lesi sihloko sachaza ngokuningiliziwe indlela yokuphatha inyumoniya ekhaya olunothando izilungiselelo. Lokhu kuzokusiza ukuba wenze izinqumo ezifanele ngempilo yazo.
Lapho udinga ukuthatha i-antibiotic ukuze sohudo abadala?
Izifo Nail fungal nokwelashwa kwazo
I-Meningitis: izimpawu zokuqala e abantu bobudala obungefani nosizo lokuqala
Izimpawu esivamile glossitis
Izinhlekelele Environmental akuzona elingapheli
Kuyini nesithuthwane nendlela yokuthatha isinyathelo naye?